Abort by user , rest - 英语 - 缅甸语 翻译和实例
您搜索了: abort by user , restart the test (英语 - 缅甸语)
ဆရာဝန်က စမ်းသပ်မှု လုပ်ရန် ညွှန်ကြားသည့်အခါ ကုန်ကျစားရိတ်များကို အာမခံ ကုမ္ပဏီက ကျခံရသည်။
The test can be done on respiratory or blood samples.
စစ်ဆေးမှုကို အသက်ရှူလမ်းကြောင်း သို့မဟုတ် သွေးနမူနာများဖြင့် ဆောင်ရွက်နိုင်ပါသည်။
ဤစစ်ဆေးမှုအား နှာခေါင်းနှင့် လည်ချောင်းကြားတို့ပတ်ဓာတ်ခွဲနမူနာယူခြင်းဖြင့် ရယူထားသည့် အသက်ရှူလမ်းကြောင်း နမူနာများဖြင့် ဆောင်ရွက်လေ့ရှိသည်၊ သို့သော် နှာခေါင်းတို့ပတ်နမူနာ သို့မဟုတ် ချွဲသလိပ်နမူနာကိုလည်း အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
The test was approved by the Food and Drug Administration under an Emergency Use Authorization.US commercial labs began testing in early March 2020.
စမ်းသပ်မှုကို အစားအစာနှင့် ဆေးဝါး စီမံခန့်ခွဲမှုက အရေးပေါ်အသုံးပြုမှု ခွင့်ပြုချက်အောက်တွင် အတည်ပြုထားသည်။ အမေရိကန် စီးပွားဖြစ် ဓာတ်ခွဲခန်းများက 2020 ခုနှစ် မတ်လ အစောပိုင်းတွင် စတင် စမ်းသပ်ခဲ့သည်။
The test uses real-time reverse transcription polymerase chain reaction (rRT-PCR).
စမ်းသပ်မှုသည် အမှန်အချိန် ပေါ်လီမာရေ့စ် ကွင်းဆက် ပြောင်းပြန်ကူးယူခြင်း ဓါတ်ပြုမှု (rRT-PCR)ကို အသုံးပြုသည်။
အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုတွင် CDC က ထုတ်လုပ်ခဲ့သော စမ်းသပ်ပစ္စည်းစုံတွင် “အမှားအယွင်းများ” ပါဝင်ခဲ့သည်။ ထို့နောက် အစိုးရက ပုဂ္ဂလိက စမ်းသပ်မှုကို တားဆီးထားသော ဗျူရိုကရေစီ အတားအဆီးများကို ဖယ်ရှားခဲ့သည်။ စပိန်က စမ်းသပ်ပစ္စည်းစုံကို တရုတ်ကုမ္ပဏီ Shenzhen Bioeasy Biotechnology ကုမ္ပဏီ လိမိတက်မှ ဝယ်ယူခဲ့သော်လည်း ရလာဒ်များမှာ တိကျမှု မရှိကြောင်း တွေ့ရှိခဲ့သည်။
&quot; Prime Minister Matovič suggested these be dumped into the Danube.Ateş Kara of the Turkish Health Ministry said the test kits Turkey purchased from China hada&quot;&quot;high error rate&quot;&quot; and did not &quot;&quot;put them into use.&quot;&quot;The UK purchased 3.5 million test kits from China but in early April 2020 announced these were not usable. &quot;
ဝန်ကြီးချုပ် Matovic က ယင်းတို့ကို Danube ထဲသို့ စွန့်ပစ်ရန် အကြံပြုခဲ့သည်။ တူရဂီ ကျန်းမာရေး ဝန်ကြီးဌာနမှ Ates Kara က တူရဂီက တရုတ်မှ ဝယ်ယူခဲ့သည့် စမ်းသပ် ပစ္စည်းစုံများတွင် “မြင့်မားသော မှားယွင်းမှုနှုန်း” ရှိပြီး “ယင်းတို့ကို အသုံးပြုခြင်း” မရှိဟု ပြောသည်။ UK နိုင်ငံက တရုတ်ထံမှ စမ်းသပ်ပစ္စည်းစုံ 3.5 သန်းကို ဝယ်ယူခဲ့သော်လည်း 2020 ဧပြီလအစောပိုင်းတွင် ယင်းတို့မှာ အသုံးပြုနိုင်ခြင်းမရှိကြောင်း ကြေညာခဲ့သည်။
Using real-time reverse transcription polymerase chain reaction (rRT-PCR) the test can be done on respiratory samples obtained by various methods, including nasopharyngeal swab or sputum sample.
အမှန်အချိန် ပေါ်လီမာရေ့စ် ကွင်းဆက် ပြောင်းပြန်ကူးယူခြင်း ဓါတ်ပြုမှု (rRT-PCR)ကို အသုံးပြုခြင်းဖြင့် စမ်းသပ်မှုကို နှာခေါင်း လည်ချောင်းဝ ဂွမ်းစ နမူနာ သို့မဟုတ် တံတွေးနမူနာ အပါအဝင် နည်းလမ်းမျိုးစုံဖြင့် ရူထားသော အသက်ရှူလမ်းကြောင်း နမူနာများပေါ်တွင် စမ်းသပ်နိုင်သည်။
ကာကွယ်ဆေး သို့မဟုတ် ဗိုင်းရပ်စ်တိုက်ဖျက်ဆေး အသစ်ကို ဆေးခန်းတွင် ပထမဆုံးအကြိမ် လက်တွေ့အသုံးပြုနိုင်ရန် လိုအပ်သော စစ်ဆေးမှုများအပြင် ဆေးဝါးထုတ်လုပ်သူများအနေဖြင့် ယခင်က စောင့်ကြည့်မထားသည့် ဖွဲ့စည်းပုံစနစ်များ (အခြားအရာများအနက် မျိုးအောင်နိုင်မှု၊ မျိုးပွားစနစ်၊ ကိုယ်ခံအားစနစ်) အပေါ် သက်ရောက်မှုများ အပါအဝင် ရေရှည် သို့မဟုတ် နာတာရှည် အဆိပ်အတောက် ဖြစ်နိုင်မှုများ ရှိမရှိ သေချာရှင်းလင်းစွာ ဖော်ပြရမည်။
manipulaatiomekanismit (芬兰语>英语)instructa (拉丁语>英语)loyal (英语>威尔士语)plekwyser (南非荷兰语>英语)car afdakke (南非荷兰语>英语)aksieprogram (南非荷兰语>英语)afstootlik (南非荷兰语>英语)i told you (英语>科萨语)温习功课 (简体中文>马来语)rujeola (罗马尼亚语>德语)lanuae magicae (拉丁语>英语)lotus is the national flower of india (英语>泰米尔语)besprinkel (南非荷兰语>丹麦语)unlawfully (英语>阿塞拜疆语)hvala lijepa (克罗地亚语>德语)eliminate (英语>斯洛文尼亚语)comprehend (英语>阿塞拜疆语)libertatem (拉丁语>德语)essay for grade 8 level (英语>南非荷兰语)entroenon oltre il 10 maggio (意大利语>英语)mahal na nga ba kita (他加禄语>英语)mahina ang water supply (他加禄语>英语)testiranje (斯洛文尼亚语>英语)wear your seat belt (英语>他加禄语)duxit uxorem (拉丁语>英语)